Vatori veNhau veNewsDay Vanosungwa kuChitungwiza Vachipomerwa Mhosva yeKutyora Mutemo weSarudzo paZuva reSarudzo dzemaKanzuru
Chivabvu 07, 2022
Mapurisa eZimbabwe Republic
Vatori venhau vaviri veNewsday Blessed Mhlanga naMuzvare Chengeto Chile vasungwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police muChitungwiza vachipomerwa mhosva yekutora mifananidzo nemavhidhiyo panzvimbo yanga ichivhoterwa, izvo zvinonzi vatyora chikamu 147(1)(f) cheElectoral Act chiri muchikamu 25 che S.I 21 ya 2005.
Gweta revatori venhau ava VaTapiwa Muchineripi vabvuma kuti vaviri ava vasungwa uye vambochengetedzwa pakamba yemapurisa yeSt Mary's Police Station.
Vatori venhau ava vanonzi vazoiswa kukamba yemapurisa yepaHarare Central Police Station uko vari mumaoko ematikitivha eLaw and Order.
Ukuwo, mumiriri weZengeza West muparamende VaJob Sikhala varambidzwawo kufambafamba munzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudzo dzema by-election dzekutsiva makanzura akadzingwa nebato reMDC-T inotungamirirwa naVaDouglas Mwonzora.
VaSikhala vanotiwo vayambirwa nemapurisa kuti vasafambefambe munzvimbo dziri kuvhoterwa vachinzi vari kuunganidza vanhu pavari kufamba. Asi VaSikhala vanoti vanhu vari kungovaunganira voga pose pavari kuenda.
VaSikhala vanoti sarudzo dzanga dzisingafambe zvakanaka sezvo vamwe vavhoti vanga vachityisidzirwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZanu PF pane imwe nzvimbo yanga ichivhoterwa yeTangenhamo Primary School.
Mutauriri weZanu PF, VaChristopher Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa zvatora nzvimbo, vakati vanga vasingade kutaura nepasipo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyathi vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo.
Asi vanhu vavhota murunyararo muKariba mumawadhi anoti 3, 4 ne8 kunyange kwakamboita kusagutsikana kwemapato anopikisa pamusoro pemagwaro emazita evanhu vakanyoresa kuvhota zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi masere nevanomwe vakanyoresa kuti vanogara panzvimbo imwechete muwadhi 8.
Munyori wezvesarudzo mubato reCitizens’ Coalition for Change - CCC-mudunhu reMashonaland West VaKudakwashe Chigumo vanobvuma kuti sarudzo dzafamba zvakanaka kusanganisira muwadhi 8.
Zvchabuda musarudzo dzanhasi zvichatanga kuziviswa nhasi manheru apo pachatanga kuverengwa mavhoti kana vanhu vapedza kuvhota nenguva dzenomwe manheru ano.
Sarudzo dzekuChitungwiza dzinotevera kudzingwa kwevaive meya veChitungwiza, VaLovemore Maiko, kuchiti dzekwaMutare dzichitevera kudzingwa kwevaive meya VaBlessing Tandi.
Dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitwa sarudzo dzemakanzuru dzinosanganisira Mutare neRusape uye tanga tisati tanzwa kuti dzafambawo sei panguva yataenda pamhepo.